မြိတ်ပသီ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရှင်မင်းယာ ရန်ကုန်မှာတဲ့၊ နာမည်အရင်း မြမြခင်တဲ့
ဝီရသူ (မစိုးရိမ်) “အမေစုကို ရုပ်ထုလုပ်၍ ကိုးကွယ်မည်” »
၁၉၂၉ခုနစ်ထုတ် မြိတ်ရာဇဝင်တော်ကြီးအရကတော့ ဆင်ဖြူရှင် ဘုရင် (၁၇၆၃-၁၇၇၆)လက်ထက်၊ မြန်မာမြို့ဝန် ခေမရာဇာက ၁၇၆၈/၁၇၇၀မှာ မြိတ်မြို့ပြန်တည်တော့ ပသီကုလားများနေသောအရပ်ကို ကန်ခေါင်းရပ်လို့ ခေါ်တယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
[ကြာတော့ကြာပြီဗျ…အွန်လိုင်းက နံမည်ကြီး တရုတ်မျိုးမစစ်တကောင်ရေးထားတာ တနင်္သာရီတိုင်းမှာ မွတ်စ်လင်တွမရှိဘူး၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကြမှ ဝင်လာတယ်၊နောက်ပိုင်းကြမှ ဘင်္ဂလီတွေခိုးဝင်လာတယ်ဆိုပြီးရေးထားတာဖတ်လိုက်ရတယ်။ထုံစံအတိုင်း LIKE ထေင်ဂဏန်းရယ်၊ SHARE တာက ရာဂဏန်း ဘယ်လောက် ဥာဏ်နဲသလဲဆိုတာ အရမ်းပေါ်လွင်တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ဒါလေးနဲ့ ထောက်ပြဘူးသေးတယ်။ အခုကတော့ ပသီ fever ပြင်းနေကြလို့ ပြန်တင်လိုက်တာ]
Reference: Source of the above page here>
This entry was posted on November 2, 2013 at 10:49 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.